Nezvedu - Danyang Yixun Machinery Co., Ltd.
DANYANG YIXUN MECHINERY CO., LTDAis inyanzvi yekugadzira kugadzira multiaxial / biaxial warp knitting muchina, musono wekusunga warp kuruka muchina uye tauro warp kuruka muchina wegirazi faibha, mubatanidzwa bonde, rakatemwa tambo tambo kutenderera uye machira ekugadzira seye anotungamira mafemu: KARL MAYER, KARL MAYER MALIMO, LIBA, RUNYUAN.
Vose vakaroorana izvi pamwe kupfuura Makore gumi nemashanumune ino indasitiri, isu tinazvo anopfuura gumi patents ekugadzirwa.YIXUN inopa yakanakisa yehunyanzvi uye yekutengesa mhinduro kune zvese zvigadzirwa nemasevhisi. Nekuona yakakwana yevatengi kubatsirwa isu takakwanisa kuve musika wepasi rese servicer yemhinduro dzakaperera mune warp knitting, warp kugadzirira kwekuruka uye tekinoroji machira.
Seyakareba-yakamira, yakavimbika bhizinesi mudiwa isu tinozvinetsa kuti tigare tichiendesa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kumatunhu ese.
Sekambani yemhuri yakazvimiririra mune zvemari ine makore mazhinji echiitiko mukutengeserana isu tinotsigira kukwikwidza uye kubudirira kwenguva refu kwevatengi vedu. Sekuvandudza mhinduro mupiro isu zvakare tinovimbisa mwero wepamusoro wekuchengetedza mari.
Zvichienderana nesangano redu repasi rese uye nezvatinoda kugadzira mumisika yedu mikuru, tinogara tichishanda padhuze nevatengi vedu uye nezvavanoda chaizvo.